Xildhibaan Xidig oo dalbaday in baaris lagu sameeyo qarax lagu dili lahaa | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Xildhibaan Xidig oo dalbaday in baaris lagu sameeyo qarax lagu dili lahaa
Xildhibaan Cabdi Rashiid Maxamed Xidig oo ka mid ah Xildhibaannada Golaha Shacabka ahna musharax Madaxweynaha Jubbaland ayaa faah faahin waxa uu ka bixiyay qarax maalma ka hor laga soo bixiyay hoyga mid ka mid ah ilaaladiisa oo ku yaalla Magalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose.
Shir Jaraa’id oo uu Warbaahinta Kismaayo ugu qabtay ayuu ku sheegay in qaraxaasi xogtiisa uu haayay,isla markaana Shaqsiyaad kooban oo ka tirsan Jubbaland ay lahaayeen,diyaarinta qaraxaas,sidoo kalena bartilmaameedka uu isaga ahaa.
Waxa uu sheegay in markii la ogaaday miinada ay mas’uuliyiin ka tirsan Hay’adaha Amniga Jubbaland tageen halkii qaraxa la dhigay,isla markaana ay qaateen miinada,iyada oo aan la sameyn qorshayaal looga hortagayay sida in la kala fur furo ama la demiyo anteenooyinka Shirkadaha.
Sigaar ah taliyaha Ciidamada ilaalada Madaxtooyada Jubbaland oo lagu Magacaabo Yaxbul ayuu sheegay in gaari uu ku qaatay miinada taasina ay shaki gelisay,waxaana uu sheegay in qorshahaas uu ahaa shirqool la doonayay in lagu dilo.
Ugu dambeyn Xeer ilaalinta Qaranka Soomaaliya, tan Jubbaland iyo saraakiisha AMISOM ayuu ka dalbaday inay falkaasi ku sameeyaan baaris deg deg ah,isla markaana aan leyskaga hari doonin,sidoo kalena uu soo bandhigi doono cadeymo dheeraad ah.
Marka laga soo tago hadalka Xildhibaan Cabdi Rashiid Maxamed Xidig ayaa Wasaaradda Amniga Jubbaland waxaa ay Xildhibaanka ku eedeysay in uu u gefay Hay’adaha Amniga Jubbaland,isla markaana qaraxa la helay ay ka dambeeyaan Ururka Al-Shabaab.
Previous articleGaalkacyo Gabar yar oo Tooreey lagu dilay
Next articlePuntland oo Xiriirka u Jartay DF& Beesha Caalamka oo Kiis loo Gudbiyay
Maamulka Hir-Shabeelle oo sheegay in Shabaabkii ugu badnaa ay soo galeen degaannadooda
Rag hubeysan oo toogasho ku dilay Shaqaalaha Hay’ad gargaar
xogdoonnews - August 10, 2020